Madda Walaabuu Press: Ibsa KWO: "Waayeen Lafa Oromoo Qixa Lafee Oromooti Lakkaawama"
Ibsa KWO: "Waayeen Lafa Oromoo Qixa Lafee Oromooti Lakkaawama"
Sadaasa 30, 2015 | Ibsa KWO/OIF
GUYAAA: Sada. 27, 2015
OROMIA INDEPENDENCE FRONT
“Waayeen Lafa Oromoo qixa Lafee Oromooti lakkaawama”
Ibsa Maastar Pilaanii Finfinnee Ilaalchisee Dhaaba Kallacha Walabummaa Oromiyaa (KWO) Irraa Kenname.
Karoorri Motummaan Wayyaanee Dhaloota isaa irraa kaasee Ummata Oromoo fi Cunqurfamoota Sabaa fi Sabllamoota Itiyoopiyaa keeyyssa jiran hunda lafa isaanii irraa buqqisee hiyyoomsuudhan qabeenya isaanii saamee humna isaa yeroo irraa gara yerootti cimsachuun bara bittaa isaa dheerafachuudha.
Karrorri Wayyaaneen maqaa “Maastar Pilaanii Finffinnee jedhuun” ummata keenyarratti fe’uuf deemtu kun itti fuufnsa karoora mootummoota Habashaa dhufaa dabrraa (Minilik – Wayyaanee) kan ummata keenya lafarraa fixanii lafa isaa humnnaan dhuunfachuuti. Walumaa gala dhimmi kun saba Oromootif dhimma baduu fi jiraachuti. Waan kana tayeef, dhaabni keenya KWOn Sabnni Oromoo yeroo ammaa carraa lama qofa qaba jedhee amana. Baduu yookaan jiraachuu. Karaan walakkaa kana deemsisu gonkuma hin jiraatu.
Haaluma Kanaan mootummaan abbaa irree Wayyaanee maqaa Maastar Pilaanii Finffinnee jedhuun Uummata Oromoo nannawa Finffinnee qubatu (Magaalaa Amboo irraa Haga magaalaa Adaamaatti) lafa Hectaara Milliyoona tokko ol ta’u irra qubatu lafa isaa irraa humnnaan buqqisee, aadaa, afaanii fi seenaa Saba Oromoo balleesee ummata biroo kan aadaa, seenaa fi afaan biroo qabu walakeessa Oromiyaati uumun Oromiyaa Bahaa fi dhihatti adda qoqoodee bituuf karoorfatee irratti hojjachaa jira.
Akka seerri mootummaa Wayyaanee lakkoofsa 49 tuqaa 5 jedhuttui magaalaan Finffinnee magaalaa mootummaa Federaalaa taatee naannoon Oromiyaa bu’aa addaa akka irraa argatuu fi dhimma bulchiinsa waloo magaalaa Finffinnee dubbata. Bu’aan kunis seeraan akka murtaayu hima. Mootummaan abbaa irree kan seera ufii isaa barreese tokkollee kabajuuf danddeetti/fedha hin qabne kun bu’aa Oromiyaan magaalaa Finffinnee irraa qabdu kabajuun hafnnaan magaalaalee Oromiyaa Godina addaa jala jiran hunda dhuunfatee saba Oromoorratti sanyyii duguuggaa daangaa hin qabne raawwachuuf karoorfatee haara galtii tokkoon malee hojjataa jira. Sabni Oromoo shira kana cal jedhee fudhachaa hin jiru. Waggaa dabrre barattonni Oromoo balaa saba Oromoo irratti aggaamate kana karaa nagahaan dura dhaabachuuf qalamaa fi waraqaa adii qabatanii hiriira bahan gara nyaattii tokkoon malee rasaasa Wayyaanetiin tumamanii ajjeefaman. Kuun mana hidhaa Wayyaanetti guuraman. Kan hafan mana barumssaa irraa ar’iaman. Wayyaaneen Saba Oromoo daangaa malee tuffachuudhaan biyya keenyarratti ilmaan keenya nu jalatti fixaa jirti. KWOn gootota haqaa isaanii osoo falmatan wareegaman kanaaf kabaja ol’aana qaba. Seenaa isaanitis bara baraan yaadata. Isaan kun gootota dhugaati.
Dhaabni keenya KWOn Karooorri Wayyaaneen fedha Uummata Oromootin ala magaalaa Finffinnee dhibantaa 80 oliin (80%) guddisuf karoorfatte aadaa, seenaa fi afaan Oromoo balleesuun seenaa, aadaa fi afaani birotin bakka buusuu waan tayeef qixa sanyii duguuggaa(genocide) uummata keenyaratti raawwachuuti jedhee amana. Kanaaf, KWOn sanyii duguuggaa bifa kanaan Saba Oromoo irratti aggaamate kana murannoodhaan dura dhaabbata, shira daangaa hin qabne kana fashaleesufis garaa kutannoon irratti qabsaaya. Wareegama barbaachisu kafaluuufi qophiidha.
Kanaaf, KWOn Uummanni Oromoo biyya keessaa fi alaan, akkasumas dhaabbotiin siyaasaa Oromoo hundi garaa garummaa yaadaa, siyaasaa, amantii qubsuma lafaatin osoo hin daangefamne tokkumaadhaan akka dura dhaabbatu waamicha lammummaa dabarsa. Dabalataan humnnoota waaraanaa fi poolisaa kanneen lammii Oromoo ta’an cufti tajaajila moottummaa Oromoo dhabamsiisuuf bu’ureeffate kanaaf laataa jiran seenaan boru akka gaafatu hubatuudhaan qabsoo ummata wajjiin akka dhaabbatan waamicha goonaaf.